OnePlus 3t Review - Rule News
Guddoomiye ku smart - Hagaha iibsadaha ee
3t OnePlus waa smartphone aad u fiican. The taam iyo dhameysato waa xaq halkaas kula ugu fiican, design biraha loo miiro, oo xataa screen 5.5in a, waa smartphone a maamuli in ay isticmaalaan on joogta ah maalin walba.
cusub ee, qalab Android hagaagay ma laga yaabaa in gorgortan ilaa xad ah OnePlus ah 3 ahaa, laakiin weli xaq halkaas kula ugu fiican
Maqaalkaan oo cinwaankeedu ahaa “dib u eegis OnePlus 3t: smartphone-dhamaadka sare ee aan bankiga u jabin doonin” waxaa qoray Samuel Gibbs, waayo theguardian.com on Monday 5th December 2016 07.00 UTC
3t OnePlus waa update yar in smartphone aad u wanaagsan oo hagaajinaysaa on qaar ka mid ah meelaha ugu muhiimsan, laakiin ma aha in gorgortan ilaa xad asalka ahaa.
The shirkad Chinese smartphone kaliya sii daayay OnePlus ah 3 in June, laakiin mar hore waxaa la bedelay. 3t waa ficil ahaan isku mid ay horreeyay, farqi yar midab ah oo ku saabsan ka baxsan calaamada kaliya in wax is beddeleen.
Sida laga soo xigtay co-aasaasaha OnePlus Carl Pei, shirkadda lahaa xoogaa horumar ah laga heli karo oo ku haboon lahaa in ka badan ama ka yar ku xirmo isku - batari weyn, processor iyo wanaajinta kamaradaha dhakhso - sidaas halkii uu ka sugi sano ah, waxay si fudud u badalay OnePlus ah 3 la 3t.
Laakiin waqti isku mid ah waxa uu sidoo kale kor u kacay qiimaha casriga ah ee, ka asalka ah £ 309 on bilaabay, iyada oo ay Brexit post sixitaanka lacagta aftida oo ah £ 329 si loo bilaabo qiimo dhan £ 399 ah. Ma 3t cusub oo ku kacaya £ 70 in ka badan jir ah 3?
Daalacan oo siman
Midabka cirro biraha qoriga waa wax yar ka badan madow cawlan ee OnePlus ah 3. Sawir: Samuel Gibbs ee Guardian ee
The jirka aluminium siman oo leh dhinacyada dib geesba iyo beveled dareensan qayb kasta oo lix bilood oo wanaagsan ku leh 3t. Waa smartphone a aad u fiican in la qabto, taabto iyo maqsuud: waxaa shaki ku jirin 3t uu fiirin iyo dareenka of smartphone a ujecel badan ka badan £ 400 oo ka.
screen AMOLED 1080p 5.5in waa weyn yahay. Hadda waxaad astaysto midab midabka aad ka jeelahay, inkasta oo ka mid ah sanduuqa dadka intooda badan noqon doonaa mid aad ugu faraxsanahay OnePlus hab midabka khiyaano isticmaalaa marka la barbar dhigo kale AMOLED-isticmaalaya telefoonada sida Samsung Galaxy ku S7.
Iyadoo cufnaanta pixel of a 401 pixels per inch, 3t ma aha arrin sida tegayo as-dhamaadka sare tartamaya Android, kaas oo ay leeyihiin qaraarada HD Bawdada at size isla screen, oo sidaas daraaddeed dhinac-ilaa-dhinac leh 534PPI Google Pixel XL waxa ay u muuqataa pin yar yar oo af badan. Inta badan ku farxi doonaa la, inkasta oo ay noqon doontaa dareemi saboolka codsiyada xaqiiqada dalwaddii.
The bezels cidhiidhi iyo dib geesba aad u maamuli karo hal-ku wareejiyay xitaa la screen 5.5in ah. Ma aha arrin sida dhuuban sida boqorkii hadda ee shaashadda weyn ee telefoonka yar lixaad, ee Edge Samsung Galaxy S7, laakiin waa 1mm yar yahay XL Pixel ah.
slider ayaa heegan kuu ogolaanayaa inaad si dhakhso ah u kala bedesho aamusan, mudnaanta iyo farriimaha oo dhan. Sawir: Samuel Gibbs ee Guardian ee
slider gaadhsiin fiican OnePlus 'dhameystiray qaar ka mid ah badhamada sidoo dhigay dhanka bidix iyo midig ee telefoonka ee.
Screen: 5.5buuxda HD AMOLED (401ppi)
Processor: Bawdada-core Qualcomm Snapdragon 821
RAM: 6GB ee RAM
Kaydinta: 64 ama 128GB
Nidaamka Operating: Android 6.0.1 OxygenOS 3.5
Camera: 16Xildhibaan gadaal camera la OI, 16Xildhibaan camera hore jeeda
Xiriiriyaan: LTE, Dual-Sim, Wi-Fi, NFC, USB-C, Bluetooth 4.2 iyo GPS
Cabirka: 152.7 x 74.7 x 7.35 mm
nolosha batari dheer
Dash Charge iyada oo USB-C for dheregtaan degdeg ah ilaa. Sawir: Samuel Gibbs ee Guardian ee
3t OnePlus waxay leedahay tiro la mid ah xasuusta iyo kaydinta badan ay dhaceen,, laakiin processor a yar ka awood badan: Snapdragon ah 821 ka Qualcomm, taas oo loo isticmaalayo in-dhamaadka sare casriga ah oo kale oo ay ku jiraan Android Pixel ee XL.
Waxa uu dareensan yahay faham ka, laakiin ma aha arrin casriga ah ee ugu dhaqsiyaha badan ee suuqa: ka Huawei Mate 9. Waxa aanu dareemaan ma wax ka dhaqso badan ee OnePlus 3, laakiin batteriga ma muddo dheer u dhexeeya eedeeyay. Waxay leedahay batari wax yar ka weyn, oo aanlarabin software lixdii bilood ee la soo dhaafay ka sameeyeen macaan yahay waayo-aragnimo ah.
Loo isticmaalaa sidii aalad hoose aan shan saacadood oo dhegaysiga muusikada dhex earbuds Bluetooth, saddex saacadood qaatay dhirta ama isticmaalaya barnaamijyadooda, ciyaaraha marmar iyo sawiro qaadashada, boqolaal farriimaha riix maalintii oo dhan, 3t OnePlus ku wareegsan socday 36 saacadaha u dhexeeya eedeeyay.
horumar weyn ka badan 3 ayaa ku jiray qaab ciyaareed heegan: halkaas oo 3 hoos 12-16% habeen, 3t hoos kaliya 4%, taas oo ah mid aad u wanaagsan marka la barbar dhigo inta badan tartanka.
Faaiidaysta batteriga waa soomi, aad. Iyadoo Dash lahaansho Charge adabtarada awood OnePlus 'iyo cable qabsaday wax yar ka badan 70 daqiiqo si ay u gaaraan 100% ka eber la'aan, taas oo ah xaq waxaa la casriga ugu dhaqsiyaha badan ku amraya kor. Waxa kale oo lagu qaadi karaa iyadoo la isticmaalayo badan wax xeedho USB, laakiin at heerka caadiga ah.
Laba naadi sim ogolaado in aad ku laba tiro ku xiran mid ka mid ah phone. Sawir: Samuel Gibbs ee Guardian ee
OnePlus 3t sidoo kale leeyahay-dual Sim taageero, taas oo macnaheedu yahay laba heshiis telefoonka gacanta iyo laba tiro oo loo isticmaali karaa waqti isku mid ah in telefoon isku mid ah. Waa muuqaal caadi ah oo waxtar leh ee Asia, laakiin dhif UK, oo ka dhigaysa safraya ama halmar isla shaqada iyo phone shakhsi sahlan gudahood qalab ka mid ah.
scanner ayaa faraha ku hor, oo laban sida button guri, waa heer sare. Waa soomi, sax ah oo ka shaqeeya weyn.
OxygenOS 3.5 waa version yar fulineed ee Android 6 Marshmallow qaar ka mid ah sifooyinka of Android 7 Nougat. Sawir: Samuel Gibbs ee Guardian ee
OnePlus customises Android si ay u abuuraan OxygenOS. Si ka duwan qaar ka mid ah soo saarayaasha kale isbedelka waa khiyaano, aanlarabin dheeraad ah halkii isbedel weyn.
Haddii aad tahay taageere ka mid ah waayo-aragnimo Android caadiga ah, aad maqsuud doonaa OxygenOS. Waxay leedahay fursado ahaanayta more, ka awood u leh inay bedelan badhamada navigation u taliya, oo wuxuu ku riday shaashadda ama isticmaal badhamada capacitive ag scanner faraha, si ay taageero tilmaam kordhiyay iyo faaidaysan lahayd ee awoodaha dual-Sim.
Laakiinse doonniyo 3t la OxygenOS 3.5, taas oo ku salaysan yahay Android ee sannadkii hore 6.0.1 Marshmallow, ma aha Android cusub 7 Nougat. OnePlus filaysaa in ay update ah si Nougat la heli karo ka hor dhamaadka sanadka. Ilaa hadda, waxa aan lahaa rikoorka ugu fiican track casriyeysan software degdeg ah, laakiin waxa uu helay wanaagsan dhowrkii bilood ee la soo dhaafay.
camera waa wanaagsan yahay iyo app camera fududaynay in ay isticmaalaan. Sawir: Samuel Gibbs ee Guardian ee
The camera gadaal 16-megapixel ayaa qaar ka mid ah hagaajinta dareemeyn inay ku faahfaahsan iyo xakamaynta qayladii in ka badan OnePlus ah 3. Guud ahaan waa camera a awood, toogtay darbo faahfaahsan ee nalalka wanaagsan oo adag haddii aan darbo cajiib ah in lowlight. Ma ahan arrin sida ugu fiican ee ugu fiican ee ka Samsung ama Google, laakiin waa adag tahay in ay qaataan shot qashinka la 3t a.
The camera sawir 16-megapixel waa mid ka mid ah xalka ugu sareeya kamaradaha hor-jeeda heli karaa, iyo in kastoo megapixels ka badan mar walba ma simanyihiin natiijooyin wanaagsan, 3t soo saaray qaar ka mid ah selfies ugu faahfaahsan oo dabiici-raadinta ee aan abid aan toogtay, xitaa in xaaladaha nalalka adag sida nalalka strip dhaadheer xafiiska.
OnePlus 3t waxaa laga heli karaa cirro biraha qoriga midkood ama dahab jilicsan la 64GB of kaydinta for £ 399 ama in biraha qoriga la 128GB of kaydinta for £ 439. Waxa kale oo la heli karo si gaar ah ula heshiis telefoonka mobile la O2 UK.
Wixii la barbardhigo, 5.5in ah Samsung Galaxy S7 Edge Kharashka £ 520, ka Google Pixel XL Kharashka £ 719, ka Huawei Mate 9 Kharashka € 699 (£ 589) iyo Apple iPhone 7 More Kharashka £ 719.
Ma arrin yahay gorgortamaan OnePlus ah 3 ahaa, iyo Uma maleynayo waa £ 70 oo dheeraad ah oo qiimihiisu ka badan model hore. Laakiin la-bedbeddelka lacagta sida ay tahay iyo pound hoos Doolarka Maraykanka waa dhan ma ku saabsan faa'iido. Waxaa weli waa qiime wanaagsan £ 400 marka Apple iyo Google ayaa casriga ah oo u dhiganta, in faano kaydinta ka yar, kacaysaa £ 719.
Iyada oo taageero ka O2, OnePlus sidoo kale hadda waxa uu leeyahay sharci dheeraad ah sida soo saaraha ah ee UK. Oo intuu halkaas dhab ahaan ay boos uu horumar, shirkada waxaa ka go'an in la gaarsiiyo updates software dhakhso.
Waxaad ka heli wax ka badan waxa aad ku bixiso la 3t OnePlus ah marka la barbar dhigo kooxda ay xafiiltamaan.
Iidooyinka: oo dhan-birta, shidma faraha weyn, screen wanaagsan, xukun degdeg ah, kamaradaha wanaagsan, slider gaadhsiin fiican, dual-Sim la dual heegan, raqiisan yahay xafiiltamaan
Arrrimaha: ma u fiicneyn sida raqiis ah sida ay mar ahaa, ma batari saari, ma kaydinta fideysa, xukun gaabis ka adapters awood la'aan non-Dash, dhigsan hooseeyo screen for VR, oo aan weli socda Nougat
Daafaca geesba dareensan weyn ee gacanta oo soo saarta qaar shakhi xiiso leh iyo midabkiinaba ilo iftiinka kala duwan. Sawir: Samuel Gibbs ee Guardian ee
Shan ka mid ah phablets ugu wanaagsan ee 2016
OnePlus 3 dib u eegis: phone flagship ee bartamihii kala duwan oo qiimaha
Huawei Mate 9 dib u eegis: screen weyn, nolosha batari dheer iyo kamaradaha dual
dib u eegis Google Pixel XL: phablet aad u fiican laakiin qiimaha tag u waafaqayaan
dib u eegis Huawei P9 Plus: phablet heer sare dib u qabtay by software sub-par
dib u eegis Samsung Galaxy S7 Edge: tani waa smartphone u garaacmo
iPhone 7 Plus dib u eegis: 2014 loo yaqaan - waxa uu doonayaa in ay dib phablet
Seynisyahanno Abuur siyasad-in-the-Madow bakaylaha
eynu Mass dhacay soomi
IBM hadlayaa ilaa maskaxda waxyoonay luqadda barnaamijyada f ...
Peter	Dec 20, 2016
← Amazon Echo Dot Review Ma Time in bedelato Mac for Laptop Windows a? →
Huawei MateBook X Review Pro
Guddoomiye ku smart: Guide Buyer A ee
Apple HomePod Ugu dambeyntii Available Iibsashada
Sidee ku hadla smart xadday show ka casriga ah